नेपाल आज | प्रधानमन्त्री ज्यू ! राजीनामा दिएर देशलाई गति दिनुस ( भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्री ज्यू ! राजीनामा दिएर देशलाई गति दिनुस ( भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू स्वस्थ रहेको प्रमाण दिंदै मनमोहन सेन्टरबाट डिस्चार्ज भएर बालुवाटार सरेपनि उनी लगभग निस्कृय देखिन्छन् । सरकार सुस्त भएको गुनासो चारैतिरबाट आउन थालेको छ ।
यतिसम्म कि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम पूर्व सांसद तथा नेविसंघका पूर्व सभापति रञ्जित कर्णले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै मागेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘ प्रधानमन्त्री गम्भीर विरामी परेकाले उनले आफनो उपचार राम्रोसंग गर्नुपर्छ । यो बेला आफनै पार्टीको कोही अरुलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिंदै उनले राजीनामा दिनु देशको हितमा हुन्छ । मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीको निस्कृयता देखिनु राम्रो होइन । ’
यो बेला नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष भनिएका पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको भेट र त्यसमा भएका कुराबारे बजारहल्ला गर्माएको छ । यति बजारहल्ला जस्तै प्रचण्डले सर्वदलीय सरकार गठनको प्रस्ताव देउवासमक्ष राखेका हुन् भने त्यो खतरनाक छ । अहिले कुनैपनि हालतमा सर्वदलीय सरकारको पछि लाग्नु हुँदैन । यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । नेकपाले सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव ल्याउनु भनेको उ सम्पूर्ण रुपमा असफल भैसकेको प्रमाण हो ।
कर्ण भन्छन्, ‘ अहिले सर्वदलीय सरकारको विषयमा कांग्रेस प्रवेश गर्नु हुँदैन । सरकार ढाल्ने सोच पनि राख्नु हुँदैन । नेकपाले म्याण्डेट पाए अनुसार अझै ३ वर्ष चलाएर देखाओस । कांग्रेसले आगामी आवधिक निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनुपर्छ । अहिले नेकपाको कुनैपनि ललिपपमा फस्नु हुँदैन । ’
नेकपाले जनतालाई ढाँट्ने काम मात्र गरेको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टमा फरक के हो भने कांग्रेस जे बोल्छ त्यो गर्छ, कम्युनिष्टहरु झूठ मात्र बोल्छन् । अहिले पनि यो सरकारले सपना देखाएर झूठको खेती गरेको छ । सुशासन, विकास र समृद्धिको नारा दिएर भ्र्रष्टाचार र बेथितीलाई बढावा दिएको छ ।
सरकारका कामबारे जनता जानकार भैरहेका छन् । विगतमा सरकारले ल्याउन लागेका विधेयकविरुद्ध जनता आन्दोलिन हुनु त्यसकै प्रमाण हो । कहिले सचिवालय र कहिले मन्त्री फेरेर मुलुक परिवर्तन हुने होइन । नेकपाले काम गर्न नसकेपछि नौटंकी मात्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । भारतसँगको सीमा विवाद हल गर्न छोडेर आफनो भ्रातृ संगठनलाई सन्दुकपुर पठाउनु नेकपाको लाजलाग्दो नौटंकी हो ।
कर्ण भन्छन्, ‘ सीमा विवाद भारतको विरोध गरेर होइन, आफनै सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई दवाव दिएर समाधान गर्नुपर्छ । कुटनीतिक पहल नै यसको सही उपाय हो । ’
नेता कर्णका अनुसार प्रधानमन्त्री स्वयंले संविधानमाथि खतरा आएको हल्ला चलाउनु खेदजनक छ । प्रधानमन्त्री आफै संविधानविपरित चलिरहेकाले उनीबाट संविधान खतरामा रहेको कर्णको दावी छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइरहेको, शक्ति केन्द्रीकृत गरेको, संविधानको भावना विपरितका विधेयक अघि बढाउने जस्ता काम गरेर संविधानलाई दुर्घटनाको अवस्थामा पुर्याएका छन् ।’ कर्ण भन्छन् ।